စိတ်ပျော်််််််််််််််််််ရွှင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ မျက်နှာမှာ ပျော်််််််််််််််််််််််််််ရွှင်နေတဲ့အရိပ်အယောင်ထင်ဟပ်နေတဲ့အပြင် ကိုယ့်ရဲဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တောက်ပြောင်နေအောင်ဝတ်ဆင်ပြီး တက်ကြွဖြတ်လတ်နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်က ပြောတဲ့အသံတွေကိုနားထောင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အောက်ပါအချက်တွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့လိုက်နာကြည့်လိုက်ပါနော််။ သင့်စိတ်ထဲ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာပျော််််််််နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
၁) ကိုယ်မနှစ်သက်ဘူးဆိုခံစားရတာနဲ့ လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့တော့။
၂) ကိုယ့်ခံစားချက်ကို ပြောပြတတ်တဲ့အကျင့်လုပ်ပါ။
၄) ကိုယ့်စိတ်ထဲက ပင်ကိုယ်သိတဲ့အသိကို လျစ်လျူမရှုပါနဲ့။
၆) ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်တော့မှ လက်မလျော့လိုက်ပါနဲ့။
၇) No ! Yes ! ပြောသင့်တာပြောရမှာကို မကြောက်ပါနဲ့။
၉) ကိုယ်မထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကို တွေးမပူပါနဲ့။
၁၀) အချိန်တိုင်း ဝမ်နည်းပူဆွေးနေတဲ့လူတွေကို ဝေးဝေးရှောင်ပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို အားကိုးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မရှင်သန်လိုက်ပါနဲ့။ အမှီအခိုကင်းအောင် ကြိုးစားနိုင်ခြင်းဟာ သင့်အတွက် စွမ်းအင်တစ်ခုပါပဲ။